Hello Guru Prema Kosame (2018) - Happybox
Angry Bird2(2019 )
2017 တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ Hello ဆိုတဲ့ အချစ်အက်ရှင်ကားလေးကို မှတ်မိကြဦးမယ် ထင်ပါတယ်။ ကြည့်တဲ့သူတိုင်းကို မျက်ရည်ဝိုင်းစေတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပေါ့။ လာပါပြီ နောက်တစ်ကား…. ဒီကားလေးက တောင်ပိုင်းမင်းသားချော Ram ရဲ့ အသစ်စက်စက် ထွက်ရှိလာတဲ့ အချစ်ဟာသကားလေးပါ။ ထူးခြားတာက. . .အိန္ဒိယကား တော်တော်များများမှာ လူဆိုး လူမိုက် လူတွင်ကျယ်အဖြစ် ခေါက်ရိုးကျိုးအောင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်Prakash Raj ရဲ့ အားရစရာကောင်းတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဟန်ပါ။
မင်းသားချော Ram က အချစ်အက်ရှင်ကားတွေနဲ့ထိုးဖောက်နေသလို လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်ကြီး Prakash ကဒီကားမှာ သမီးဖြစ်သူကို စိတ်မချတဲ့ ဖအေတစ်ယောက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ လူကြမ်းဇာတ်ရုပ်ကို လူအများ ရွံစရာဖြစ်အောင်အမြင်ကပ်စရာဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်တတ်သလိုဒီလို တမူထူးခြားတဲ့ ဇာတ်ရုပ်မှလည်း Prakash ဟာ ဆရာကျနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ ဒီကားမှာ မင်းသားမင်းသမီးထက်Prakashကို တအားကြိုက်သွားပါတယ်။ ” ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ” ဆန်ဂျူးဆိုတာက မိဘနှစ်ပါးက အလိုလိုက်ထားလို့ရပ်ကျော်ရွာကျော်လုပ်နေတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုး ခပ်ပေပေ လူငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ မိဘတွေရဲ့ဆန္ဒအရ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ဟိုက်ဒရာဘတ်က Prakash တို့အိမ်မှာ သွားနေရပါတယ်။ Prakashနဲ့ သူ့အမေက ငယ်သူငယ်ချင်းတွေမို့Prakash အိမ်မှာ နေရင်း အလုပ်လုပ်ရင်းပေါ့။ Prakash ရဲ့ဇာတ်ကောင်နာမည်က ဗစ်ရှ်ဝါနာ့သ်တဲ့။ ဗစ်ရှ်ဝါက လူတစ်မျိုးဗျ။ သူ ပေးထားတဲ့ ကတိတစ်ခုကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆို ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့ လူမျိုး။ သူ့မှာ ဆန်ဂျူးနဲ့ရွယ်တူ သမီးလေးတစ်ယောက် ရှိသေးတယ်။အာနူးတဲ့။အင်ဂျင်နီယာ ကျောင်းသူလေးပေါ့။ မောင်မင်းကြီးသား ငပွေးဆန်ဂျူးနဲ့ အာနူးတို့က လာလာချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်းဆိုသလိုပဲဆန်ဂျူးမြို့ကို တက်လာတဲ့နေ့မှာပဲ ရထားပေါ်မှာ ရန်ဖြစ်လာကြသူတွေ။ ဒီတော့ တစ်အိမ်တည်းမှာသာ အတူနေကြတာ. . . တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြည့်လို့ရတဲ့သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ သို့ပေမယ့် ဆန်ဂျူးက အာနူးကို နေ့စဉ် ဆိုင်ကယ်နဲ့ကျောင်းကို လိုက်ပို့ပေးရတယ်။အနေနီးလာတော့ သံယောဇဉ်ဖြစ်လာရင်းကနေ အမောင် ဆန်ဂျူးရဲ့ မသိစိတ်မှာ အာနူးဆိုတဲ့ အချစ်ကြိုးလေးက လာပြီးငြိတွယ်မိတယ်။ ကိုယ်တိုင်က မသိပေမယ့် အာနူးကို အိမ်ထောင်ချပေးဖို့အတွက်သူ့ဖခင်ကြီး ဗစ်ရှ်ဝါက သူ့မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့သားနဲ့ လူကြီးချင်း စကားပြောလာပြီးတဲ့ အချိန်ကျမှ…ဆန်ဂျူးဟာအာနူးကို ချစ်မိနေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ဗစ်ရှ်ဝါနဲ့ ဆန်ဂျူးတို့က အချင်းချင်း ရင်ဖွင့်ကြရင်း ဆန်ဂျူးဟာ ဗစ်ရှ်ဝါဆီကကတိတစ်ခုတောင်းတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းအဖြစ် တစ်လတိတိ နေပေးပါ့မယ်ဆိုတဲ့ ကတိ။ ဗစ်ရှ်ဝါ့ဆီက ကတိရပြီဆိုမှ ဆန်ဂျူးက သူဟာ အာနူးကို ချစ်မိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း၊သူ့ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့ကူညီပေးရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဗစ်ရှ်ဝါ့ကို ချုပ်ကိုင်တော့တယ်။ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ လူကြီးချင်းစကားကျွံထားပြီဖြစ်တဲ့ သမီးရဲ့အချစ်ကိုမောင်မင်းကြီးသား ဆန်ဂျူးက လိုချင်သတဲ့။ ကိုယ့်ကတိနဲ့ကိုယ်မို့ ဆန်ဂျူးခိုင်းသမျှ ဗစ်ရှ်ဝါ လိုက်လုပ်ရ၊တစ်ဖက်က သူ့သမီးကို ဆန်ဂျူးနဲ့ မနီးစပ်အောင် တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ကြိုးစားရနဲ့ ဗစ်ရှ်ဝါ့အဖြစ်က ဆုပ်လည်း စူး၊စားလည်း ရူးဖြစ်နေရတယ်။ ဒီကားလေးမှာတစ်ကားလုံး လုံး၀ မပျင်းရအောင် ဆန်ဂျူးနဲ့ ဗစ်ရှ်ဝါတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုကို ကြည့်ရမှာ ဖြစ်သလို….၊Hello လို ရင်ထဲမှာ တသသဖြစ်ကျန်ရစ်မယ့် အချစ်ကားလေးတွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် အမှတ်တရတစ်ခု အဖြစ် ယူဆောင်လာပေးမယ့် ကားလေးတစ်ကား ဖြစ်ပါကြောင်း…။ Credit: Channel Myanmar
Category: Bollywood Comedy Drama Romance